Maraykanka oo duqeyn cirka ah ku dilay xubno ka tirsanaa Al shabaab - Halbeeg News
MUQDISHO (HALBEEG) – Ciidamada Maraykanka ee fadhigoodu yahay Africa (AFRICOM) ayaa duqeyn ay labo maalmood kahor ka fuliyeen dalka Soomaaliya ku diley, labo dagaalyahan oo ka tirsanaa Ururka Al shabaab.
War-saxaafadeed kasoo baxay Taliska AFRICOM, ayaa lagu sheegay in duqeynta oo dhacday bishan September 11deedii, lala beegsaday goob fariisin u ahayd Al shabaab, taas oo masaafo dhan 37km galbeedka kaga beegan magaalo madaxda dalka ee Muqdisho.
“Iyagoo kaashanaya ciidamada Dowladda Federaalka ee Soomaaliya, ciidamada Maraykanku, waxay fuliyeen duqeyn bartilmaameedkeedu ahaa mileeshiyaadka Al shabaab, taasoo ka dhacday meel 37 km jihada galbeed kaga beegan magaalada Muqdisho, taariikhdu markay ahyd September 11, 2018, laguna diley labo ka tirsanaa argagixisada” war-saxaafadeedka ayaa sidaas lagu yiri.
War-saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in duqeyntani jawaab u ahayd weerar Al-shabaab kusoo qaadday fariisin ay ku wada sugnaayeen ciidamada Maraykanka iyo kuwa Dowladda Soomaaliya. Qoraalka waxaa sidoo kale lagu xusay in aysan jirin askar Maraykan ah oo weerarka Al shbaab wax ku noqday haseyeeshee uu dhintay askari ka tirsanaa ciidamada Soomaaliya, labo kalena dhaawacmeen.
Taliska Ciidamada Maraykanka ee Afrika, oo magaciisa loo soo gaabiyo AFRICOM, ayaa sidoo kale sheegay in aysan jirin haba yaraatee dad rayid ah oo ay duqeyntii 27da bishan dhacday waxyeello kasoo gaartay.
Waa markii afraad muddo bil gudaheed ah ee diyaaradaha Maraykanku duqeyn la beegsadaan fariisimaha Al-shabaab, waxayna tani kusoo aadeysaa xilli ciidamada Maraykanku sannadkan dardar xooggan geliyeen hawlgallada ay ka fuliyaan Soomaaliya, gaar ahaan duqeymaha loo adeegsado diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ka dhaca gobollada Hirshabeele, Jubbaland iyo Puntland.
Madaxweyne Gaas oo xariga ka jaray dhismaha wasaaradda kalluumeysiga Puntland